Tag: sehatra fitantanana data | Martech Zone
Tag: sehatra fitantanana data
Manantena aho fa hitsahatra tsy hiteny an'izany ireo mpivarotra…
Alakamisy, May 7, 2015 Zoma, Febroary 2, 2018 Douglas Karr
Nitsidika ny foiben'i Genesys izaho sy i Lennity tamin'ity herinandro ity ary nipetraka tao amin'ny ekipan'izy ireo ara-barotra nomerika ary iray amin'ireo fanontaniana nipoitra ny hoe raha mametraka infografika ao ambadiky ny fisoratana anarana ve isika. Namaly haingana izahay fa mbola tsy nanao an'izany mihitsy. Ny ekipa Interactive dia nilaza fa nanao fitsapana niaraka tamin'ny whitepaper sy infographic ary 0% voasoratra ary nisintona ny whitepaper ary 100% voasoratra mba hijery ny
Inona avy ireo fitaovana mifandraika amin'ny angon-drakitra ampiasain'ny mpivarotra handrefesana sy hamakafaka?
Sabotsy, Oktobra 11, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo lahatsoratra nizara be indrindra izay nosoratanay dia ny momba ny analytics sy ny karazana fitaovam-pikarohana izay misy hanampiana ireo mpivarotra hanara-maso ny zava-bitany, handinika ny fahafaha-manatsara, ary handrefy ny valiny sy ny fihetsiky ny mpampiasa. Fa inona no fitaovana ampiasain'ny mpivarotra? Raha ny fanadihadiana farany nataon'ny Econsultancy dia mampiasa be loatra ny analytics an-tranonkala ny Marketers, avy eo Excel, analytics ara-tsosialy, analytics amin'ny finday, A / B na fanandramana multivariate, tahiry fifandraisana (SQL), sehatry ny raharaham-barotra momba ny raharaham-barotra, fitantanana ny mari-pamantarana, vahaolana fanelanelanana, fanentanana fanentanana,